Somaliland: Xukuumadda oo Fulisay Qoddob ka mid ah Balan Qaadkii Madaxweyne Muuse ku Galay Doorashada - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Xukuumadda oo Fulisay Qoddob ka mid ah Balan Qaadkii Madaxweyne Muuse...
Xukuumadda oo Fulisay Qoddob ka mid ah Balan Qaadkii Madaxweyne Muuse ku Galay Doorashada
loogu tartami doono si caddaalad ah oo loo siman yahay, waxaanu xaqiijiyey in arrintaasi tahay siyaasad cad oo Xukuumada Madaxweyne Muuse Biixi ku shaqayn doonto. “Waxa naga go’an in qandaraasyada dawladdu bixinayso nooc kasta oo ay
yihiin loogu tartamo si caddaalad ah, waana dhaqan siyaasadeedka ay ku shaqeynayso Xukumada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo doonaysa in loo sinaado khayraadkadalka,”ayuu yidhi Guddoomiyaha Guddida qandaraasyada qaranku.
Waxa kaloo uu intaas ku daray inay wax ka beddeleen nidaamkii hore ee shirkaduhu u soo codsan jireen Qandarasyada
warbaahinta laga naadiyo, waxaana goobtaasi ka soo xaadiray wakiillo ka socday 33ka shirkadood ee qandaraaskan danaynaya
oo mid waliba sidatay sharciyadoodii iyo qiimaha ay ku doonayaan in lagu siiyo dhismaha jeelka Gabiley oo dawladdub maalgelinayso.
iyo Dhulka Cabdirashiid
Ducaale Qambi ayaa
caddeeyey inuu soo
dhawaynayo saaxadda fu- ran ee Guddida qandaraasyadu ku kala saarayaan shirkadaha danaynaya qandaraaskan, waxaanu tilmaamay in lagu kala reebi doono si xor ah.
Jaamac Shabeel “ Beelaha Qaar wuu khaarajiyay Muuse…”